Klopp “Tababare Solskjaer khadka ayuu ku soo celiyay Manchester United taasina waa mid iska cad” – Gool FM
(Liverpool) 23 Feb 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee waddanka Ingiriiska Jurgen Klopp ayaa ka hor kulanka culus ee ay kooxdiisu berri garoonka Old Trafford kula yeelan doonto Manchester United waxa uu ka hadlay macallinka naadiga United ee Solskjaer.
Klopp wuxuu xusay inuu aaminsan yahay in Solskjaer uu khadka ku soo celiyay Manchester United, taasina ay tahay mid aan la xaqiri karin, maadaama 13 kulan oo uu kooxda hor boodayay ay MU badisay 11 jeer.
“sixirooleyaal ma nihin, laakiin awoodda ay leedahay Manchester United haatan waa mid aad u wanaagsan, wayna iska cadahay inuu wax badan oo wanaagsan qabtay Solskjaer” ayuu yiri Klopp.
“Haddii tababarenimo toos ah loo qaato Solskjaer ma ahan war annaga noo fiican, balse waa war farxad gelinaya dhammaan taageerayaasha Manchester United” ayuu sii raaciyay tababaraha Jarmalka ah.
“waxa uu dib ula soo baxayaa waxyaabihii lagu yaqaannay Sir Alex Ferguson, khibrad weyn ayuu ka soo dhaxlay waqtigii uula soo qaatay Ferguson ee Manchester United”.
Liverpool haddii ay guuleysato kulanka berri ee Horyaalka Ingiriiska ah waxa ay si toos ah hoggaanka uga qabanaysaa kooxda Manchester City, waxaana ay yeelan doontaa 68 dhibcood, halka Man City leedahay 65 dhibcood.